ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ ♪ ♫ ♩ ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အလှူငွေလိမ်လည်မှုများဖြင့် သတင်းကြီးနေသူ Qing Minya( ရှင်မင်းယာ)
ABSDF KILLING- SPYCASE “TRUTH OF 21 CENTURY” »
ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ ♪ ♫ ♩ ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ
◄(စိုင်းထီးစိုင်… သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေ) ►
ရန်ကုန်နဲ့ဝေးဝေး ဝေးတဲ့ နယ်မြေ ♪ ♫ ♩
နေပြည်တော်သွားပီး ဆောက်ကြမယ်လေ ♩ ♬ ♭
တသက်လုံးပုန်းအောင်းဘို့နေရာကိုရှာဖွေ ♭ ♮ ♯
ဗမာပြည်မှာ သူခိုးသူဝှက် အပေါဆုံးနယ်မြေ♩ ♬ ♭ လူလိမ်တွေအများဆုံး ရှိတဲ့ နယ်မြေ ကလိမ်ကကျစ်တို့အများဆုံး နေထိုင်ရာနယ်မြေ♩ ♬ ♭ ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ ♩ ♬ ♭
လိုခြင်တာအားလုံး ခိုးယူနေ ♭ ♮ ♯ အာဏာကိုလဲ အလွဲသုံးစားနေ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပီး ခိုးကာလေ♪ ♫ ♩ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတောင် ခိုးလို့ နေ သူခိုးကြီးများ စုကာနေ ♪ ♫ ♩ နေပြည်တော်လို့ တော့ဆိုင်းဘုတ်တင်နေ ♭ ♮ ♯ နေခြင်စရာတစက်မှ မရှိတဲ့ နယ်မြေ ♩ ♬ ♭ ဂူအောင်းပီး မီးတုတ် ကိုင်ကာနေထိုင်နေ ♩ ♬ ♭ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ ဖွတ်ကြားတို့ကြပ်ပြေးနယ်မြေ♩ ♬ ♭
တေးရေး/တေးဆို။ ။နတ်ခမ်းလိတ်နှင့်C A H P /////////////////////////////////////////////// တေးဂီတ။ ။စောင်းထောင်း ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ဟာမိုနီ။ ။စောင်းထောင်းအဖွဲ့ ………………………………. Credit Photo to C A H P
This entry was posted on January 9, 2014 at 5:04 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.